China Underground jikọtara substation emepụta na suppliers |Shengte
ọdụ ụgbọ ala jikọtara ọnụ
Ebe a na-eli ozu bụ ka e liri kpamkpam ihe mgbanaka igbe ọdịnala na nke e liri ọkara n'okpuru ala, ala anaghị emetụta ojiji ya.
Kedu ihe bụ ọdụ ụgbọ mmiri jikọtara ọnụ?
Usoro ZBW-D nke dị n'okpuru ala jikọtara ụdị ọdụ ụgbọ ala jikọtara ọnụ bụ mkpokọta substations zuru oke na-ejikọta kọbọd mgba ọkụ voltaji dị elu, ihe ngbanwe e liri, na igbe nkesa ike dị ala.Ọ bụ ntọala nke ụlọ ọrụ anyị iji mezuo ihe ndị a chọrọ maka iwu obodo na nchebe gburugburu ebe obibi na ọdụ ụgbọ mmiri jikọtara.Usoro nke ngwaahịa emepụtara na emebere na China.Ebe a na-ejikọta ọnụ n'okpuru ala nwere uru nke nkà na ụzụ dị elu, ọdịdị mara mma, obere mkpọtụ, ọrụ nchekwa na ntụkwasị obi, mmezi dị mma, nhazi kọmpat, na obere akara ukwu.Ọ dị mma maka ebe ọha na eze mepere emepe, n'okporo ámá, ogige ntụrụndụ, ebe obibi, ebe ndị mara mma, wdg. A na-eji saịtị ahụ maka ịnweta na ikesa ọkụ eletrik na usoro nkesa ike.N'ime usoro nkesa ike, enwere ike iji ya na mgbanaka netwọk ike nkesa ike, ma nwee ike iji ya mee ihe na ọkụ ọkụ abụọ ma ọ bụ radieshon ọdụ ike nkesa.
1. Ebe elu anaghị agafe 1000m.
2. Ambient okpomọkụ: kasị elu okpomọkụ bụ 40 ℃, kacha ala okpomọkụ bụ -25 ℃, kasị elu kwa ụbọchị nkezi okpomọkụ adịghị gafere 30 ℃, na kwa ụbọchị okpomọkụ dị iche bụ ≤20℃.
3. The ikwu iru mmiri nke ikuku adịghị gafere 90% (+25 ℃).
4. Ọsọ ifufe dị n'èzí anaghị agafe 35m / s.
5.Ọchịchọ nke ala adịghị agafe 3 Celsius.
6. Enweghị ihe egwu nke mgbawa, ọkụ, mmetọ dị njọ, chemical corrosion na oké ịma jijiji na saịtị ntinye.
7. Mgbe ọnọdụ ndị dị n'elu nke ojiji enweghị ike izute ihe ndị a chọrọ, onye ọrụ nwere ike ịkparịta ụka na ụlọ ọrụ anyị iji dozie.
A na-ekewa ọdụ ụgbọ ala jikọtara ọnụ ụzọ abụọ: ala na ala.A na-ekewa akụkụ ala ahụ n'ime igbe ọkụ ọkụ ọkụ dị elu, igbe nkesa ọkụ eletrik na shells, na ala dị n'okpuru ala bụ ihe ntụgharị na igbe e liri.
Ọdịdị Shell: A na-eji osisi aluminom-zinc na-ekpuchi shea ahụ, a na-eji osisi kpuchie elu ya, n'elu bụ elu ụlọ elu nke nwere metal glazed.A na-ekewa ọnụ ụlọ nke ọdụ ụgbọ mmiri ahụ n'ime obere ụlọ ndị nwere onwe ha nwere efere ígwè, ma nwee ngwaọrụ ọkụ.Ihe mkpuchi dị n'elu bụ nhazi okpukpu abụọ, nke nwere ike igbochi radieshon ọkụ ka ọ ghara ịba ụba n'ime ụlọ ma n'otu oge ahụ nwere ezigbo ikuku.
Igwe ọkụ dị elu: Kabinet dị elu na-anabata SF6 mkpuchi mgbanaka mgbanaka netwọkụ ma ọ bụ SF6 kabinet mgba ọkụ, nke nwere nhazi kọmpat, obere nha, ntụkwasị obi dị elu, ogologo ndụ ọrụ yana enweghị mmezi.
Ngalaba dị obere voltaji: Kabinet dị ala na-anakwere kabinet GGD, nke enwere ike iji igwe elele, mpụta, nha, na ike ngwaọrụ akwụ ụgwọ akpaaka dịka ihe onye ọrụ chọrọ.
Ntugharị ihe na-agbanwe agbanwe: Onye ntụgharị ahụ na-anakwere ịrị elu okpomọkụ dị ala, ihe ngbanwe dị n'okpuru ala dị ala, akụkụ dị elu nke onye na-agbanwe agbanwe na-enweta njikọ nkwụnye ọkụ nke zuru oke, mkpuchi mkpuchi zuru oke, na akụkụ voltaji dị ala na-anakwere ụzọ ọkụ ọkụ dị ala. ngwaọrụ maka ntinye, ọ bụrụgodị na a na-emikpu ihe ngbanwe ahụ kpamkpam n'ime mmiri a pụrụ ịdabere na ya, a na-etinyekwa transformer n'ime igbe e liri na mbụ, wee lie ya n'ala.Mkpọtụ nke transformer agaghị agbasa n'ala, na-egbochi mmetọ mkpọtụ.Ọ bụrụ na transformer na-agbapụta mmanụ, mmanụ ahụ ga-adaba na tankị e liri, ọ gaghị emetọkwa gburugburu ebe obibi.
Nke gara aga: Ọnụ ala dị ala maka China Zhegui Electric 1250kVA 15/0.4kv 11/0.4kv Compact Cubicle Transformer Substation na Rated Voltage 11kv 13.8kv 15kv
Osote: Ezigbo aha njirimara maka China Industrial High Temperature na High Pressure Steam Flow Control Valve